Speutable: Native Mgbasa ozi esighi na maka arthapụ ndị ọbịa | Martech Zone
Ọ bụrụ n’ị bụrụ onye mbipụta akwụkwọ, itinye ego n’ahịa nke ndị na - ege gị ntị na - abụkarị ihe ịma aka - ọkachasị ma ọ bụrụ na ịnọ na ebe nrụọrụ weebụ. Gosiputa mgbasa ozi nke amaghi na ezughi oke ma e jiri ya tụnyere usoro mgbasa ozi ndi ozo, ya mere ndi mbipute na-efunahụ na mgbasa ozi ezubere iche na-agba ọsọ na ọchụchọ na mmekọrịta. Mgbasa ozi ndi ala abịarutewo ụzọ isi bulie ego maka ndị na - ebipụta akwụkwọ - mana edeela m na ọ nwere ike ịbịa n'ụdị nkwenye a.
Ekwu okwu nwere ike ịnwe ezigbo azịza - ma anyị anwalela ya ebe a Martech Zone. Tinyere mgbasa ozi na-agba n'ime ọdịnaya (nke nwere ike ịbụ icky), ha na-enye ihe ọpụpụ ebumnuche azịza ya dị mma nke ukwuu. Mgbe mmadụ na-akwadebe ịhapụ saịtị gị, mara mma over-dina panel na-egosi na-enye ụfọdụ nhọrọ onye ọrụ. Na saịtị anyị, panel ahụ na-ebute isiokwu asatọ na-agwọta ndị na-ege anyị ntị.
Speutable na-enye ọtụtụ ebe ndị ọzọ na-arụ ọrụ na desktọọpụ na mobile:
Enwere m mmasị na ngwọta a n'ihi na ọ naghị egbochi onye ọrụ nwere ọrụ nke na-anụ ụtọ saịtị anyị. A na egosiputara ya naanị onye ọrụ nke na-apụ na saịtị ahụ. Ndị mgbasa ozi abụọ ahụ na ndị mbipụta akwụkwọ nwere ike nyochaa oge ha na-eme na oge.
Ngosipụta: Anyị bụ mmekọ Ekwu okwu.
Tags: ọpụpụ ebumnuchepụọ n'elu-dinaramgbasa ozi nke alanwa afọ mgbasa oziover-dinaspoutable
5 Àgwà Na-eguzosi Ike n'Ihe Ndị Ahịa Na-achọ Si Ahịa na Ahịa gị
Sep 25, 2017 na 6:04 PM
Ha nwere cpm jọgburu onwe ya maka ndị nkwusa. Ọtụtụ ndị na-eji mgbasa ozi mgbasa ozi anaghị ahụ mgbasa ozi ọpụpụ.